Dowladda UK oo dalbatay in go’aanka doorashada loo daayo Soomaalida oo kaliya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda UK oo dalbatay in go’aanka doorashada loo daayo Soomaalida oo kaliya
Dowladda UK oo dalbatay in go’aanka doorashada loo daayo Soomaalida oo kaliya
Danjiraha dalka Ingriiska u fadhiya Muqdisho Ben Fender ayaa sheegay in la joogo xilligii Soomaalida ay go’aamin lahaayeen hoggaanka ay doonayaan, marka laga hadlayo nooca iyo qaabka ay noqon doonto doorashada soo socotana.
Hadalkaan ayaa waxa uu jeediyay markii uu ka soo laabtay dalkiisa.
‘Waxaan xushmeyneynaa madax-bannaanida Soomaaliya, cidda hoggaamineysa iyo ka shaqeynta doorashadaba waxaa go’aankeeda leh Soomaalida oo keliya” ayuu Fender ku yiri muuqaal laba daqiiqo ah oo laga soo duubay
Dhowr bilood ayaa ka haray doorashooyinka dalka , gaar ahaan Baarlamanka iyo tan madaxweynaha oo la qorsheynayo in la qabto 8-da, bisha February, sanadka 2021-ka. Hase-ahaatee xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ayaa dowladda ku qasbaya iney la qaadato nooc doorasho, si looga fogaado muddo kororsi.
Guddiga doorashada ayaa horay u codsaday 70 milyan oo dollar, si loo qabto doorasho dadweyne, taas oo ka bedalan tii dhacday dhammaadkii 2016-kii iyo billowgii 2017-dii, oo la aaminsanyahay in musuq maasuq badan uu hareeyay.
Danjiraha dalka Ingriiska ee Soomaaliya Fender ayaa waxa uu sheegay iney kusoo noq-noqdeen su’aalaha la xiriira halka dowladdiisa ay ka taagantahay doorashooyinka Soomaaliya, hase-ahaatee ay jawaabtu tahay in go’aanku ay Soomaalidu leeyihiin.
Dhinaca kale waxa uu ugu baaqay dhammaan dhinacyada Soomaalida, iney ka dhabeeyaan fulinta ballamihii shirkii ka dhacay Dhuusamareeb.
Hadalka safiirka UK ee Soomaaliya ayaa yimid xilli si weyn indhaha loogu hayay aragtida beesha caalamka ee xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, xilli dalka uu hadda galay marxalad kala guur ah.
Dowladda UK oo dalbatay in go’aanka doorashada loo daayo Soomaalida oo kaliya was last modified: August 3rd, 2020 by Admin
Masar iyo Itoobiya oo sare ugu qaaday rajada aqoonsi ee maamulka Somaliland
Shirka Beelaha Mudullood oo furmay Muqdisho iyo Madaxdii hore ee dalka oo ka qeyb galaya
Dhageyso: Dhalinyarada Shaqa La,aanta Ah Ee kujirta Xiryaha Baracayaasha Magaalada Baydhabo Oo Dalbaneya In Loo Sameeyo Shaqa Abuur.
Brack Obama oo dhaliil adag usoo jeediyay Madaxweyne Donald Trump
Kiiskii ugu horeeyay ee Coronaha cusub oo laga helay dalka Maraykanka
Raiisal Wasaare Ku xigeenka oo daah furay Imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiga Sare
Akhriso:-Shirka Golaha Wasiirrada Oo Lagu Ansixiyay Siyaasadda Dalxiiska Soomaaliya